Raw Methandriol powder (521-10-8) Mpanao & mpamatsy - Factory
Methandriol, fantatra koa amin'ny hoe methylandrostenediol, dia androgen sy anabolic steroid (AAS). Ny 17α-alkylated AAS sy ny 17α-methylated derivative ny endogenous androgen prohormone androstenediol.
Rano metandriol roatine (521-10-8) video
Rano Methandriol roat (521-10-8) Description
Ny kôdôtera vita amin'ny metaneindrool dia steroid izay tena mitovy amin'ny prohormone 5-androdiol afa-tsy hoe alfa alkalin'ny C-17 ary manaloka amin'ny tendrony roa ihany koa. Vovonan'ny Methandriol roah dia metabolized amin'ny methyltestosterone, metabolites estrogenic ary ny 5-alpha fihenam-bidy ho an'ny profesionera misy vokany mampiaretana ity steroid ity. Ny "fampitomboana ny fahombiazana" izay mampihetsi-po azy io rehefa ampiasaina miaraka amin'ny andrèna hafa araka izay napetrak'i Duchaine sy ny hafa dia mety ho mifandray amin'ny fihenan'ny hydroxylase 11-beta izay hahatonga ny fahabetsahan'ny rano sy ny vokatra antikatabolika amin'ny alalan'ny fihenan'ny siramamy cortisol. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fihenan'ny hydroxylase 11-beta dia mety hiteraka fihenjan-koditra sy fiantraikany hafa amin'ny vozona.
Rano metandriol roja (521-10-8) Specifications
Product Name Rano métandriol roanjato
Anarana simika Mestenediol, Diolandrone, Metandriol; Methandrolan; Protandren
Brand Name Crestabolic, Cytoboline, Diandren, Madiol, Stenediol, Mestenediol
molekiolan'ny Formula C20H32O2
molekiolan'ny Wvalo 304.47
mitsonika Point 205 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Tokony ho ora 6
Solubility Mamoaka zava-pisotro misy alikaola
Inona no atao hoe vovon-koditra mena (521-10-8)?
Methylandrostenediol (metandriol ho fohy) dia steroid anabolic avy amin'ny dihydrotestosterone. Ny zava-mahadomelina dia vita amin'ny endrika roa tena miavaka. Ny voalohany dia ny methylandrostenediol, tsy misy fanavahana (mahitsy), izay ampiasaina rehefa manao fanafody am-bava miaraka amin'ity steroid ity (na dia nisy aza nampiasaina taloha tany Etazonia). Io ihany koa dia hita ho dipropionate methylandrostenediol verterified, izay voaomana ho toy ny tokiable. Ireo etona propionate fanampiny ao amin'ny endrika manjavozavo dia manitatra ny asan'ny rongony mandritra ny andro maromaro. Amin'ny ankapobeny, ny fanafody metandriol dia nanova ny endriky ny c17-alkylated 5-androstenediol. Methandriol dia sokajina ho anabolika marefo miaraka amin'ny toetra malemy androgenic. Toa mampiseho ihany koa ny karazana fihetsika estrogenic, ka mahatonga an'io sorona io ho tsara kokoa ho an'ny sakafo. Ny medikaly dia heverina ho malemy loatra, ary tsy dia be mpitia loatra eo amin'ireo mpanao biriky sy atleta. Indraindray anefa dia ampiasaina ho solon'ireo mpiasa anabolisy / androgenika hafa ao anaty fonosam-pandehanana rehefa misy izany.
Ahoana ny fomba famonoana metanina mivantana (521-10-8) asa
Rano metandriol roat (521-10-8) Dosage
Ho an'ny lehilahy:
Ny torolalana omena ho an'ny Stenediol dia manome toro-marika ny dosage 25 mg nomena 2 hatramin'ny ora 5 isan-kerinandro amin'ny lalan-tsakafo, bccal, na intramuscular. Ho an'ny tanjona ara-nofo na fampivoarana ny fampiasana, ny dosage mahazatra dia ao amin'ny 25-50 mg isan-andro isan'andro ho an'ny vava, ary 200-400 mg isan-kerinandro miaraka amin'ny lozika. Mba hitazonana ny tahan'ny rà, na dia amin'ny lozabe aza, dia alamina isaky ny telo ka hatramin'ny efatra andro. Ny ankapobeny dia tsy mahatratra hatramin'ny 6 hatramin'ny herinandro 8, amin'ny ezaka hanamafisana ny hepatotoxicité sy ny fihenan'ny atiny sy ny soatoavin'ny kolesterola. Io fampiasana io dia ampy ho an'ny tombony maivana amin'ny haben'ny hery sy ny tanjaka, izay mety ho ambany kely amin'ny fihazonana ny rano.
Na dia mety ho azo atao aza ny mampiasa methylandrostenediol irery ho an'ny tanjona fanorenana, dia matetika izy io miaraka amin'ny anabolika hafa ho an'ny vokatra matanjaka kokoa. Raha mifandray amin'ny Deca-Durabolin® na Equipoise®, ohatra, dia mety ho voan'ny habetsaky ny hery misitery mafy, raha tsy misy ny fihenan'ny rano fisotro madio, no voamarikao. Ity no singa ankapobeny ny ankamaroan'ny aostraliana vet mifangaro izay ahitana methylandrostenediol. Rehefa mitady hahazo tombony amin'ny ankapobeny ny olona, ​​dia mety hampiakatra tsikelikely ny ranomaso toy ny testosterone. Ny fitomboana vokatr'izany dia mety ho tena miavaka, fa ny mpampiasa ihany koa dia mila miatrika amina hery goavana kokoa avy amin'ny estrogenic. Ny zava-mahadomelina koa indraindray dia mampifandray tsara amin'ny anabolika tsy aromatika toy ny Winstrol®, Primobolan®, na oxandrolone. Ny vokatra eto dia tokony hisy fiantraikany kokoa amin'ny fiasan'ny hareza, miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny tavy marefo
Ho an'ny vehivavy:
Ny torolalana omena ho an'ny Stenediol dia manome toro-marika ny dosage 25 mg nomena 2 hatramin'ny ora 5 isan-kerinandro amin'ny lalan-tsakafo, bccal, na intramuscular. Ny Methylandrostenediol dia tsy ankatoavina ho an'ny vehivavy noho ny tetika ara-batana na fampivoarana ny fampiasana azy noho ny endriky ny androgenic sy ny fironana hamokatra virilizing side effects.
Rano métandriol roanjato (521-10-8) soa
Ny Methandriol dia manana anabolika sy endriky ny androgenic izay manampy amin'ny fananganana hery sy tanjaka. Azo afindra amin'ny solika koa izany. Ankoatr'izany, tsy mitahiry rano betsaka izy io ary mbola mahomby mandritra ny fotoana maharitra kokoa noho ny mendandriol. Ampiasaina amin'ny steroid hafa izy io, izay mampitombo ny vokatr'ireo molekiolan'ny steroid amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fahatsapana fisorohana ny sela. Ampiasaina amin'ny fitsaboana tranainy ihany koa izy io. Ireo atleta mampiasa io dia nahazo ny hozatra, ny tanjaka ary koa ny fihenan'ny rano fisotro.
Buy Buy Methandriol from Buyaas.com